Ikhaya lanamhlanje elincinci eline-zen vibe.
Mahishmari, West Bengal, India
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguSandeep
I-Minimalism ingundoqo kwaye siphefumlelwe yi-Scandinavian, i-Hygge kunye ne-Wabi-Sabi indlela yokuphila.
Izinto zokulala zodidi oluphezulu ezikumgangatho ophezulu, i-wifi ekhawulezayo, i-smart tv, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela elicocekileyo, indawo yokusebenza, indawo yokuphumla kunye neendawo zokupaka zasimahla.
I-Casa Omi yindibaniselwano yendlela ezinzileyo kodwa yokuphila kamnandi. Indlu yestudio inenkonzo yazo zonke izinto ezisisiseko kwaye ilungele umhambi oyedwa kunye nezibini ezitshatileyo, zinokubamba abantu aba-4.
ICasa Omi iphethwe kwaye iyilwe ngumyili wefashoni ophumelele ibhaso kunye nentshatsheli ezinzileyo uOmi (Sandeep) Gurung.
Le flethi ibhiyozela uyilo lwangaphakathi oluncinci kwaye imalunga neendawo ezivulekileyo ezibanzi kunye nokunqongophala okupheleleyo kwe-clutter. Ikhaya eliqeshisayo linengqokelela elungileyo yeencwadi zokufunda ngexesha lokuzonwabisa. Inendawo yokusebenzela apho umntu anokusebenzela ekhaya.
Iziselo zenziwe zifumaneke ngesicelo sangaphambili. Imifuno, iziqhamo kunye nemifuno zikhuliswa ngokujikeleze ikhomponi. Indawo yangaphandle yendlu inika umtsalane we-rustic kwindlu yanamhlanje encinci.
I-HDTV ene-I-Netflix, I-Disney+, I-Amazon Prime Video
Indawo engqonge iCasa Omi ikunika umtsalane wangoku we-rustic wendlela yokuphila yasezidolophini nasezilalini.
Iivenkile ezithengisa ukutya, indawo yokubhaka, isaluni yobuhle kunye nerenti yemoto zikwindlela enkulu (uhambo olu-1min).
Imakethi yaseDebidanga kukuhamba nje kwe-5mins ukusuka eCasa Omi. Rhoqo ngooLwezihlanu ukusuka ngentsimbi yesi-2 ukuya kweyesi-8pm kulungiselelwa “i-haat bazaar”. Yimakethi evulekileyo esebenza njengendawo yokurhweba yabantu basekhaya, apho unokufumana uluhlu lweziqhamo, imifuno, izinto zasekhaya, iimpahla kunye nee-knick-knacks.
I-Arirang - indawo yokutyela yokwenyani yaseKorea ibekwe kwi-3mins kude.
Emva kweflethi kukho indawo yokudlala apho umntu unokuphuma ahambe ekuseni. Ukuba uyayithanda iti, kukho indawo yokutyala iti kwimizuzu nje eli-10 ukusuka kwigumbi lokuhlala. Ungakonwabela ukutshona kwelanga ukwiflethi kwaye uve iintaka zintyiloza ngexesha lasemini.
Umbuki zindwendwe ngu- Sandeep
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mahishmari